Cabdullaahi Maxamuud oo ku guulestay doorashada Kursi ka banaanaa Golaha Shacabka – Kalfadhi
Cabdullaahi Sh. Maxamed ayaa ku guuleystay kursigii ka banaanaa Golaha Shacabka ee ay buuxinta doorashadiisa maanta ka dhacday magaalada Baydhaba ee Xarunta Dowlad Goboleedka Koofur Galbeed Soomaaliya (KGS). Cabdullaahi waxa uu Wareegii Koowaadba helay 35 cod oo ka mid ahaa codadkii Ergada, oo ka koobnaa 42 Ergo, taas oo u suurtagelisay inuu isla wareegaasba guuleystay.
Waxa uu uu Wareega Koowaad ee Doorashada uga guuleystay 3-dii musharrax ee kale ee kula tartameysay xilka: Isaaq Khaliif Duurey oo helay 4 cod, Cabdulqaadir Sh. Maxamed Nuur oo helay 2 cod iyo Xasan Macalin Ibraahim oo aan waxba helin. Hase ahaatee, la taratamayaashaa Cabdullaahi midna kama joogin goobta doorashada, oo wey ka maqnaayeen Madasha Doorashada, sababtana lama oga ilaa iyo hadda.
Mid ka mid ah musharraxiinta guuldareysatay, Isaaq Khaliif Duurey, waxa uu ahaa wiilka Xildhibaankii ka dhintay kursiga loo tartamayey, Marxuum Khaliif Sh. Cabdullaahi Duurey, kaas oo ku geeriyooday Muqdisho, kadib muddo uu ku xanuunsanaa isbitaal ku yaala caasimadda.
Xildhibaan Cabdullaahi Sh. Maxamed ayaa guushiisa kadib waxa uu la hadlay ergada u codeysay, waxa uuna ku yiri “waan faraxsanahay, waana naxsanahay”. Isaga oo dareenkaas sii sharaxaya ayuu sheegay in, marka la fiiriyo inuu guuleystay uu aad u faraxsan yahay, hase ahaatee uu aad uga naxsan yahay sida uu u gudan doona masuuliyaddaas. “Xildhibaannimadeydu waxay ku miisaan ahaan doontaa awoodda dowladnimadeena” ayuu yiri Xildhibaan Cabdullaahi, waxa uuna Alle ka baryey inuu masuuliyaddu u sahlo.
Guddiga Doorashooyinka Qaranka, oo isku dayaya iney dadka ka qanciyaan sababta ay u qabteen doorasho ay guuleystaha ciddii la tartami lahayd ka maqneyd goobta doorashada, iyada oo uu guuleystuhu joogay, ayaa sheegay in ay 3-da musharrax ee kale ay qaateen shahaadadoodii aqoonsiga iney musharrax u yihiin kursiga ka banaan Golaha Shacabka, loona sheegay in waqtiga doorashada ay maanta ahayd, ayna go’aansadeen ineysan shaqo qaran u joojin dad maqan, sida ay hadalka u dhigeen.
Hase ahaatee sida uu sheegay Guddigu, waxaa kaloo jiray khilaaf u dhaxeeya beesha kursiga loo tartamay, taas oo uu Xubin ka tirsan Guddiga, Xuseen Cabdi Aadan, ka sheegay goobta doorashada in ay iyaguna doonayeen in sifo sharciya loo wajaho hab-raaca iyo hanaanka doorashada kursigaas ka banaanaa Golaha Shacabka ilaa Abriil 2018, qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee lahaa soo xulidda ergada wax dooraneysana ay arrinkaas ka biyo diideen, sida uu hadalka u dhigay.